Maxkamadda ICC oo dambiyo ku heshay Bosco Ntaganda – Radio Daljir
Nofeembar 7, 2019 12:27 g 0
Maxakamada Caalamiga ah ee ICC ayaa dambiyo dagaal ku heshay Mr Bosco Ntaganda oo ah hogamiyihii hore ee mucaaradka dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo.
Garsoorayaasha maxkamada dambiyada caalamiga ah ayaa ku xukuntay ama ku caddeysay hoggaamiyahaasi in uu ku kacay 18-kiis oo dambi ah ,isla markaana ka dhan ah xuquuqul insaanka iyo dambiyo dagaal oo ay geysteen dagaalyahanada mucaaradka ee uu hogaaminaayay.
Maxkamaddu weli ma shaacin xukunka uu muteystay,hasa yeeshee ,Xeer ilaaliyaha ayaa doonayaa in Mr,Bosco lagu xukumo 30 sano oo xabsi ah,halka qaar kale ay iyaguna doorbidayaan xabsi daa’in.
Mr Bosco Ntaganda waa qofka afaraad ee Maxkamadda Caalamiga ah ee ICC ay ku hesho dambiyo dagaal iyo xadgudubyo kale oo ay ka mid yihiin kufsi iyo dil barer ah.
Bosaaso: Shabaabkii ugu badnaa oo xukun dil ah lagu fuliyay